HATSARAINA NY “LOGICIEL AUGURE” AMIN’NY FITANTANANA NY MPIASAM-PANJAKANA :
Hiroso amin’ny fanatsarana ny logiciel AUGURE isika ka :
1) Hampidirina ao avokoa tsy ho ela ny mpiasam-panjakana rehetra tsy ankavanaka toy ny miaramila, ny zandary, ny mpiasan’ny antenimiera, ny mpiasan’ny « Etablissements publics » sy ny mpiasa any amin’ireo ratsamangaikan’ny fitondrana isam-paritra.
2) Hisy ihany koa ny fanomezana “carte biométrique” ireo mpiasam-panjakana rehetra ary ny fametrahana ny norme ISO ho an’ny fikirakirana informatika.
3) Hisy ny fampidirana ireo “avancement d’échelon”, fiovan’ny fandoavam-bola, ny fikajiana ny fialan-tsasatra, ny fanavaozana ireo fifanarahana, ny fampiantoana ny karama, sns,…
Mikasika ny fampiatoana ny karama dia hisy ny fampiatoana ny karaman’ireo izay mpiasam-panjakana tsy hita hoe mankaiza ary ireo olona nandray vola nefa tsy miasa na tsy voaisa ho mpiasam-panjakana ara-dalàna fa nandray volam- panjakana dia tsy maintsy mamerina izany avokoa, miampy ny fanesorana azy ireo anaty lisitra ary koa ny fanasaziana. Miisa 7547 izy ireo ary mbola eo am- panamarinana ny momba azy ireo ny ao amin’ny fitantanam-bola ankehitriny.
MPAMPIANATRA FRAM AO AMIN’NY LYCEE: FANAMPIANA TAORIAN’NY COVID-19:
Manoloana ny fiantraikan’ny valan’aretina covid-19 dia nisy ny fanampiana nomen’ny tetikasa PAEB ho an’ireo mpampianatra FRAM eny anivon’ireo sekoly garabola, ny ambaratonga voalohany ary ambaratonga faharoa. Ny fanjakana kosa no handray an-tanana ny fanampiana ireo mpampianatra FRAM eny anivon’ny Lycée mba hampitovy lenta ny fitantanana ireo mpampianatra rehetra miasa eny anivon’ny sekolim-panjakana manoloana ny fiantraikan’ny valan’aretina.
Nomena fanalefahan-ketra ny Centre d’Infectiologie Charles Merieux eny Ankatso izay nanafatra fitaovana ilaina amin’ny laboratoara fitiliana sy fitaovam-piarovana hoentina miady amin’ny valan’aretina.
ADY AMIN’NY TSY FANJARIAN-TSAKAFO :
11 amin’ireo 18 kaominina iharan’ny Kere any atsimon’ny Nosy izay any amin’ireo toerana tena saro-dàlana no tena sahirana ankehitriny ka hitondrana fanampiana sy vonjy aina avy hatrany. Efa nisy ny fidinana ifotony saingy mbola hamafisina izany ary ny Filoham-pirenena no hidina any hitondra ny fanampiana entin’ny fanjakana ary koa ny hanamafy sy handamina ireo tetikasa maharitra sy fotodrafitrasa iadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo any amin’ny faritra atsimo.
Nankatoavina ny volavolan-dalàna mialoha mikasika ny “Loi de Règlement” ho an’ny taona 2017 izay halefa hodinihan’ny antenimiera roa tonta amin’ny fivoriana ara-potoana manaraka taorian’ny tsirihana nataon’ny “Cours des comptes” manoloana ny fandaniam-bolam-panjakana tamin’izany taona 2017 izany.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ny Minisitry ny fahasalamam-bahoaka :
Nankatoavina ny volavolan-dalàna mahakasika ny fampindramam-bola ho an’ny tetikasa PARN iarahana amin’ny Banky iraisam-pirenena mitentina 38,47 miliara ariary natao sonia ny 24 jona 2020.
Nolanian’ny Filankevitry ny Minisitra ny didim-panjakana mamaritra ny filan’ny fanjakana ireo toerana voafaritry ny drafitra fanorenana tanàna ao amin’ny tanànan’Ambositra.
Araka ny tolo-kevitry ny Sekreteram-panjakana misahana ny zandarimariam-pirenena eo anivon’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena:
Noraisina ny didim-panjakana nampitombo ny fe-potoana nahazoana laharam- boninahitra ho an’ny Lieutenant RATSIMBAZAFY Nirintsoa Patrick (bonification d’ancienneté de port de garde d’un officier de carrière de la Gendarmerie nationale).
M. RAMAMONJISOA Noelson Berthin, dia voatendry ho Directeur Régional de l’Administration Pénitentiaire d’Analamanga.
Atoa RAKOTONANAHARY Njaranaina Hugues, dia voatendry ho Talem- paritra misahana ny fonja ao Bongolava
Atoa RALOA Pierre Auguste, dia voatendry ho Talem-paritra misahana ny fonja ao Diana.
Atoa RAMBELOSON Tony, dia voatendry ho Talem-paritra misahana ny fonja ao Sava.
Atoa RAZAFINDRAHANA Philémon Doré, dia voatendry ho Talem- paritra misahana ny fonja ao Boeny.
Atoa BENOARISON SOLOTIANA Jasmin Dominique, dia voatendry ho Talem-paritra misahana ny fonja ao Betsiboka.
Atoa RAKOTO Jaonandrasana Daniel Toussaint, dia voatendry ho Talem-paritra misahana ny fonja ao Ihorombe.
Commissaire Principal de Police RABARIJAONA Holimahefa Eric, dia voatendry ho Tale misahana ny fitantanana ny mpiasa.
Commissaire Principal de Police TOMBO Jacky, dia voatendry ho Talem-paritra ao Ihorombe.
Atoa RALAINIRINA Razokiny Eric, dia voatenrdy ho Tale Jeneraly misahana ny Etablissements Scolaires.
Ratoa RATSIMISETRA Felamboahangy, dia voatendry ho Chef d’Unité de Facilitation des Projets
Atoa RATAVILAHY Harilala Andriniaina, dia voatendry ho Tale misahana ny « Patrimoine Foncier et des Infrastructures ».
Atoa RASAMISON Jullino Serge, dia voatendry ho Tale misahana ny « Planification de l’Education »
Ratoa RAVELOSON Julie Anna, dia voatendry ho Tale misahana ny « Formation Pédagogique »
Ratoa RAKOTONDRAMANANA Sylvia, dia voatendry ho « Chef d’Unité de Contrôle et d’Audit ».
Atoa ANDRIANIRIANA Feno Soja Richard, dia voatendry ho Tale misahana ny Système d’Information.
Ratoa RABEMANANTSOA Adrienne Irma Rabe, dia voatendry ho Chef d’Unité de Communication.
Atoa RAKOTONANDRASANA Jeannot Aimé, dia voatendry ho Tale misahana ny « Education Non Formelle »
Ramatoa RAKOTOVOLOLONA Helikanto Tsimandefitra, dia voatendry ho Tale misahana ny « Curricula et des Recherches Pédagogiques ».
Atoa RAKOTONIRINA Justin, dia voatendry ho Tale misahana ny « Education de Masse et du Civisme ».
Atoa ANDRIANILANONA Jery, dia voatendry ho Tale misahana ny « Education Fondamentale et de la Petite Enfance ».
Atoa ANDRIANARISON Tinaina Edinah, dia voatendry ho Tale misahana ny « Examens et de la Certification ».
Atoa RAKOTONIAINA Roger, dia voatendry ho Tale misahana ny « Encadrement Scolaire et de l’Inspection Pédagogique ».
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arakasa :
Atoa TSIRAHAMBA dia voatendry ho Tale Jeneraly misahana ny fampianarana Teknika sy ny fanofanana arakasa.
Ramatoa RAVOLOLONARIVO Domoinaniaina, dia voatendry ho Tale misahana ny « Etudes et Techniques (DET) ».
Ramatoa RAKOTOMALALA Judickaêl Yvanna, dia voatendry ho Tale misahana ny « Infrastructures et de la Logistique (DIL) ».
Atoa RASOLOMALALA Heri-Lanto Luciano dia voatendry ho Talem- paritra Analamanga.
Ny filankevitry ny minisitra dia nandray ny didy manafoanana ireto didim- panjakana manaraka ireto :
Foana ny didim-panjakana nanendry ireo Tale Foibe rehetra tao amin’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fanofanana arak’asa teo aloha.
Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Indostria, Varotra ary Asa-tanana :
Foana ny didim-panjakana laharana faha 2019-879 tamin’ny 24 aprily 2019 nanendrena ny Talem-paritra ao Analanjirofo.
Natao androany faha 30 Septambra 2020
DEMOKR’ANKIZY- NOVAMBRA 2020